Manjakamiadana taona 2013: tsangam-bato ny fampihavanana | mandimby maharo
Manjakamiadana taona 2013: tsangam-bato ny fampihavanana
Posted on 7 November 2013 8 November 2013 by Mandimby Maharo
«… itodihana ny lasa, banjinina ny ho avy ». Mahafintina ny andron’ny omaly 06 novambra io. Daty iray tsy ho voafafa eo amin’ny tantaran’i Madagasikara tokoa ny 06 novambra 1995 nahamay ny Rova Manjakamiadana. Nentina nanamarihana ny tsingerin-taona faha valoambin’ny folo nisin’izany indrindra no nanokafana ity Vakoka iray eto Imerina ity ho an’ny daholobe. Isan’ireo hetsika entina nandraisana ireo mpitsidika ity lapa ity ny « Iaino Manjakamiadana », nokarakarain’ny fikambanana Vohimasina.
Fampiarahana ny mahafinaritra sy ny fahalalana no nisongadina nandritra ireo fotoana rehetra nitsidihana an’i Manjakamiadana omaly maraina. Fitsidihana izay notarihin’ireo tanora mpianatra ao amin’ny Lycée Technique et Commercial Ampefiloha (LTCA), izay nahazo fiofanana manokana ka afaka nampiaina ny tantara nisy tao anatin’ireo vatobe mandrafitra izany Rova izany. Nomena aina tokoa manko ny rindrina izay nanamarika ny tanjaky ny firenena malagasy tamin’ny andro fahampajaka. Tsy ivon’ny fanjakana ihany nefa ny rova teo amin’ny malagasy fa fehizoro mamatotra ny fomba sy ny fitsipim-piarahamonina ihany koa ; ka ny fampatsiahivana ny tokony hanajana Izany indridra no nentin’ireo tanora mpianatra eny amin’ny oniversite mivondrona hiaro ny tontolo iainananisarihana ny sain’ireo mpitsidika. Fanazavana sy fitondrana ireo tantara no nandrafetany izany ka nahaliana ireo olona tonga nanatrika sy nitsidika ity lapa ity. Ireo rehetra ireo dia nolaroina kanto tamin’ny alaln’ny hira sy kalo, famp irantiana sary sy lahatsoratra ary vakoka maro nanomezana endrika mahafinaritra ny takariva teny an-drova. Mbola tanora ihany koa no nitondra io endriaka iray tsy ho adino io.
Afa-po, ary nentanim-po ny maro iny andro iny. « Tanjona ny hanokafana ny fijery ny Rova mihoatra ny maha-vatatrano azy, amin’ny alalan’ny kolo-tsaina sy ny tantara izay niatomboka teto » hoy ny fanazavana avy amin’dRamatoa Randriamampianina Mialisoa, isan’ireo mpikarakara ny hetsika. « Mihavery ny fahalalana ny tantara sy ny fomba amam-panao, mihen-danja koa ny soatoaviana. Ka ny fandraisan anjara amin’ny hetsika ara-kolotsaina toy izao no afahatsika mameno ny banga izay tsy vita any an-tsekoly », hoy kosa Madame Lala, mpampianatra ny taranja malagasy ao amin’ny LTPA, nitarika ireo tanora omaly.
Ireo mpitsidika koa dia samy nahatsapa izany elanelana eo amin’ny tontolo ivelomantsika ankehitriny izany sy ny maha-malagasy antsika. Ny mpanakanto Hanitrarivo Rasoanaivo dia nanentana fa “Ny tantarako no nitrandrahako ny harenako. Haren-tsaiko. (…) Ny tantara no ilaina averina atsangana aloha. Ndao iainana ny tantara hibanjinana ny ho avy.”. Toy izany koa no nampatsiarovan’ny mpandinika Emerson A. ny rehetra fa “Anjara sy adidintsika tsirairay ny mamantatra ny tantara. Ilaina anefa ny rafitra hampirindra ny tantara mba hampisy ny tantara iombonana” … “Mampisavorovoro ny tsy fisian’ny tohivakana avy @ mpandalina mankany @ vahoaka: ny famahoana, fibeazana, fanabeazana ». Fampitana hosoratana amin’ny alalan’ny fifaninanana “Soraty Manjakamiadana”
Amin’izao kihom-potoana iainan’ny firenena izao dia isan’ireo hetsika nanana ny lanjany iny omaly iny. Tsy ny maha andro fisentoana noho ny fahatsiarovana mainty ihany, fa nentina koa namelona ny afom-pihavanana ao anatin’ny malagasy. Tsy ny fihavanana sy fampihavanana eo amin’ny samy olona fotsiny ihany izay dradradradraina ankehitriny ihany nefa fa ny fihavanana sy fampihavanana ny malagasy amin’ny tantarany. Halatsika loatra ny tantarantsika. Mahamenatra sy tsy tiana ho tsiahivina, nefa izy ireny no fototra niaingantsika. Hany ka tsy mahay mandray lesona aminy isika. Fotoana anekena ny tantara izao, na dia tsy mamiratra toy izay tiantsika aza izany. Fotoana hanoritana lalana sy hanoratana tantara mazava araka izay irintsika koa izao. Raha mahay mihavana amin’ny tantara sy ny fomba isika dia hanoro ny lalana izoratsika izy ireny ka ho fanohitra entina hiatrehana ny ho avy. Izay ilay « dia-tana… »
Tags: fady, fomba, Imerina, Malagasy, Manjakamiadana, mdg2013Categories: Culture